ဆောက်လုပ်ရေး Gingerbread အိမ်စာရွက် + template ကို - ကွတ်ကီး
ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ gingerbread အိမ်တွေကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားသလဲစဉ်းစားဖူးသလား။ တော်တော်လေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရပါတယ်။ ဒီစာရွက်မဟုတ်ဘူး။ ဒီဆောက်လုပ်ရေးတန်း gingerbread အိမ်စာရွက်သည်အလွန်ခိုင်မာသည်! ငါသုံးပတ်အကြာငါ့အိမ်ကိုဖန်ဆင်းကနေဆဲခိုင်မာတဲ့ရပ်နေ၏။ သငျသညျ, ကိုချုံ့သဲ, မှိုထဲမှာဖုတ်ခြင်းနှင့်သကြားပြတင်းပေါက်သွန်းလောင်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အကြံဥာဏ်များအတွက်စာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လက်!
ငါသည်သင်တို့ကိုအနည်းငယ်လျှို့ဝှက်ချက်အပေါ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, အားလုံး gingerbread တန်းတူဖန်တီးမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအံ့ဖွယ်ကောင်းသောအိမ်များကိုပြုလုပ်သော Gingerbread ကိုဆောက်လုပ်ရေး gingerbread ဟုခေါ်သောအရာဖြင့်ပြုလုပ်ထားကြောင်းသိရှိရ။ သင်အံ့အားသင့်သွားပါလိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်စားရန်မဟုတ်ဘဲတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်သာဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာပုံမှန် gingerbread cookie မုန့်စိမ်းမှကောက်ပဲသီးနှံအိမ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အိမ်ကိုစုဆောင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ cookie မုန့်စိမ်းပြန့်သွားတာဒါမှမဟုတ်ကွဲအက်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်။
San Diego မှ Parky Hyatt Aviara မှမုန့်ဖုတ်စားဖိုမှူးဖြစ်သူသူငယ်ချင်း Christophe Rull ထံမှကျွန်ုပ်ရရှိသော gingerbread အိမ်စာ။ ၁၂ ပေကျော်မြင့်တဲ့ Gingerbread အိမ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဒီစာရွက်ကိုငါတို့အသုံးပြုခဲ့တယ်။ အိမ်မှာတစ်လကျော်ပြသရန်ရှိခဲ့ပေမယ့်နေဆဲကြောင့်ငါအောက်မှာတစ် ဦး ဖွဲ့စည်းပုံရှိခဲ့ပါတယ်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်နေဆဲ, ငါအစဉ်အမြဲငါအသုံးပြုသောအကောင်းဆုံးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ gingerbread ပဲ!
ခရစ်စတိုဖ်ကသူ့စာရွက်ကိုငါနဲ့အတူမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းတို့လည်းအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် gingerbread အိမ်တွေကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်
ပထမ ဦး စွာ gingerbread အိမ်စာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုအတူတကွစုစည်းရန်လိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့စားစရာခန်းထဲမှာသင်လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးရှိပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိူင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုတော့သိပ်အသုံးမပြုတဲ့အတွက်သကာရည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ သကာရည်သည်ကြက်သွန်ဖြူကိုကောင်းမွန်သောမှောင်မိုက်သော Gingerbread အရောင်ကိုပေးသည်။
ဒီ gingerbread အိမ်စာတွင်လည်းအတိုကောက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ငါတို့ကဒီ gingerbread အိမ်ကိုမစားဘူးဆိုတော့နင့်အမွှေးတွေအားလုံးကိုကျော်သွားနိုင်ပေမယ့်သူတို့ကကောင်းတဲ့အနံ့နဲ့ကြည့်တဲ့အိမ်ကိုအရောင်နဲ့ရနံ့တွေထည့်ပေးလိုက်တယ်။
ကြက်ဥ pasteurized လျှင်မည်သို့ပြောပြရန်
အဆင့် 1 - သင်၏ဂျုံမှုန့်၊ သစ်ကြံပိုး၊ ဂျင်း၊ အခွံမာသီး၊ လေးညှင်းပွင့်များနှင့်ဆားများကိုပန်းကန်လုံးထဲထည့်။ ဖယ်ထားပါ။
အဆင့် ၂ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက်အားမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွင်သို့မဟုတ်မီးဖိုပေါ်၌အရည်ပျော်ကျသည်အထိအရည်ပျော်အောင်လုပ်ပါ။ ကျနော်တို့ကဒီ gingerbread ကိုမစားသောကြောင့်အရသာအရေးကြီးသောကြောင့်မတိုတာကိုသုံးသည်။
အဆင့်3- သင့်ရဲ့ရပ်တည်ချက်ရောနှောခြင်း၏ပန်းကန်ထဲမှာ, တို, သကြားနှင့်သကာရည်ကိုပေါင်းစပ်။ သင့်ကြက်ဥထဲထည့်ပြီးချောမွေ့သည်အထိရောမွှေပါ။
အဆင့်4- သင်၏ခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုကြက်ဥအရောအနှောထဲသို့ထည့်။ ချောမွေ့သောမုန့်စိမ်းမထွက်မှီတိုင်အောင်ရောနှောပါ။
အဆင့်5- သင်၏မုန့်စိမ်းတစ်ဝက်ကိုခွဲပြီးလျှင်ဆီလီကွန်မုန့်ဖုတ်ဖျာပေါ်သို့ ၁/၄ out ထူ။ ဖြန့်လိုက်ပြီးနောက်သကြားပြတင်းပေါက်များကိုနောက်ထပ်သွန်းလောင်းနိုင်သည်။
အဆင့်6- မုန့်စိမ်းကိုလှိမ့်ပြီးနောက်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်မိနစ် ၂၀ ခန့်ထားပါ။ ၎င်းသည်တင်းပလိတ်များကိုဖြတ်တောက်ရာတွင်ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီးသူတို့၏ပုံသဏ္holdာန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အပိုင်းအစများကိုနီးကပ်စွာမနေဘဲအတူတကွထားရန်ကြိုးစားသည်။ သို့မဟုတ်မုန့်ဖုတ်စဉ်အတွင်းသူတို့ထိနိုင်သည်။ ဒီစာရွက်မပျံ့နှံ့ပါဘူးဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့နည်းနည်း puff ပါဘူး။ ကျန်ရှိသောမုန့်စိမ်းကိုနောက်မှသိမ်းထားပါ။
ငါ့မှာ Gingerbread အိမ်ပုံစံ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် gingerbread အိမ်များကိုလုပ်ဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါသိသည်ကအလွန်သေးငယ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်းစုစည်းပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် gingerbread အိမ်သူအိမ်သားတစ် ဦး ချင်းအလှဆင်ရန်အတွက်၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစားဖြစ်သည်။ Gingerbread အိမ်သုံးစာရွက်တစ်လုံးသည် gingerbread house သုံးခုပါလိမ့်မည်။
အဆင့် 1 - မင်းရဲ့ template ကိုပုံနှိပ်ပါ။ သင်၏ template ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပါ။
အဆင့် ၂ - ရေခဲသေတ္တာထဲရှိသင်၏အအေးခံမုန့်စိမ်းကိုယူပြီးလျှင်သင်၏ဂျင်းပေါင်မုန့်အိမ်အပေါ်သို့တင်ပါ။ သူတို့ကိုနီးကပ်လွန်း။ မထားပါနှင့်သို့မဟုတ်မုန့်ဖုတ်သောအခါသူတို့သည်တို့ထိကြလိမ့်မည်။
သင်အုတ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုထည့်ချင်လျှင်ယခုမဖြတ်မီသင်၏မုန့်စိမ်းထဲထည့်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ ငါ x-acto ဓါးကိုသုံးပြီးဓါးနဲ့ထိုးတယ်။ ရုံသင့်ရဲ့ဆီလီကွန်ဖျာမှတဆင့်ဖြတ်ကြဘူး!
အဆင့်3- ပိုလျှံသောမုန့်စိမ်းကိုဖယ်ရှားပြီးအခြားအိမ်များသို့လှိမ့်ချထားပါ။
အဆင့်4- မီးဖိုပေါ်ရှိအပိုင်းအစများကို ၃၀၀ ံဖာဖာဖာဖွန်းတွင်မိနစ် ၅၀ မှ ၆၀ အတွင်းဖုတ်ရမည်။ အရောင်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ၊ အကယ်၍ သူတို့သည်သူတို့အလွန်မှောင်မိုက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းခံစားမိပါက၊ သူတို့ကိုချက်ချင်းထုတ်ယူနိုင်သည်။
အဆင့်5- အက်ကွဲခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်၎င်းကောက်ယူခြင်းမပြုမီ Gingerbread ကိုအပြည့်အဝအေးမြစေပါ။ ကျန်ရှိသောမုန့်စိမ်းကို သုံး၍ တတိယအကြိမ် gingerbread အိမ်ဖြစ်လာသည်။
ရွေးချယ်စရာ - သင်၏ Gingerbread အိမ်တွင်အုတ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြုလုပ်နည်း
ငါ့အိမ်တစ်လုံးအတွက်ကျွန်တော်ဟာအုတ်ပုံဆွဲပစ္စည်းသုံးခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ ချွန်ထက်မြက်တဲ့အနားတွေရှိတယ်။ သင်ကတွန်းလိုက်တဲ့အခါ gingerbread cookie မုန့်စိမ်းကိုမဖျက်နိုင်လို့ပါ။ Nicholas Lodge ။
ငါ့မုန့်ညက်အိမ်ထဲနံရံပေါ်ကဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အုတ်ကိုရဖို့မုန့်မဖုတ်ခင်ကိုယ့် cookie မုန့်စိမ်းထဲကိုဖောင်းကြွကိရိယာကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲ။ ငါထွက်လှည့်ပုံကိုကြိုက်တယ်
ရွေးချယ်မှု - Gingerbread House Windows ကို Jolly Ranchers ဖြင့်ပြုလုပ်နည်း
သင်၏ Gingerbread အိမ်တွင်ပြတင်းပေါက်များထည့်ရန်သင်ရှိသည်မှာမလိုပါ။ သို့သော်သင်သည်ငါကဲ့သို့သောအပိုဖြစ်ပါက (သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်) ထို့နောက်သင်သည်သင်၏ Gingerbread အိမ်အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပြတင်းပေါက်အချို့ကိုလုပ်ချင်တော့မည်! မင်းအတွက်ကံကောင်းတယ်၊
သငျသညျလိုအပ်သမျှခဲယဉ်းသကြားလုံးအချို့ပေမယ့်ကောင်းတဲ့နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေဖို့ပြတင်းပေါက်ဖို့လှည့်ကွက်သကြားအခမဲ့သကြားလုံးကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သကြားမပါသောသကြားလုံးကိုခေါ်သည့်အရာဖြင့်ပြုလုပ်သည် isomalt တကယ်တော့ရိုးရာသကြားထက်တိမ်များပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ကျွန်တော့်ပြတင်းပေါက်တွေအတွက်သကြား၊ အပြာနဲ့အစိမ်းရောင်မှာသကြားမပါတဲ့ rolhers and hard candies တွေကိုသုံးခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုငါပလတ်စတစ်အိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ mallet နဲ့သေးငယ်တဲ့အပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးအပိုင်းပိုင်းပျံသွားမှာမဟုတ်ဘူး။
ထို့နောက်သင်လုပ်ရမည့်အရာတိုင်းသည်အရောင်တစ်မျိုးစီကိုသင်၏ချက်ပြုတ်ထားသော gingerbread မှဖြတ်ပစ်လိုက်သည်။ အရည်ပျော်သွားသည်နှင့်၎င်းကိုဖြည့်ရန်မကြောက်ပါနှင့်။
ငါနောက်ဆုံးမုန့်ဖုတ်သည့်ငါးမိနစ်အတွင်းသကြားလုံးကို cutout ဒေသများသို့ငါထားလိုက်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်လုံးဝအရည်ပျော်မဟုတ်ပါကနောက်ထပ်တစ်မိနစ်လုပ်နိုင်သော်လည်းကြာရှည်စွာမထားခဲ့ပါကသို့မဟုတ်သူတို့လောင်ကျွမ်းလိမ့်မည်။ ကျောရိုးရှိဆီလီကွန်မုန့်ဖုတ်ဖုတ်ကိုမဖယ်ရှားမီသင်၏ cookies များကိုလုံးဝအေးအောင်ထားပါ။ Voila! စူပါလှပသော gingerbread cookie ကိုပြတင်းပေါက်များ! ဒါလွယ်ကူ!
တစ်စတုရန်းကိတ်မုန့်အပေါ် fondant ထားရန်မည်သို့မည်ပုံ
သငျသညျရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတင်းပေါက်ချင်လျှင်သင်ရှင်းလင်းသောသကြားဓာတ်သကြားလုံးကိုသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင် isomalt ကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါ pre- ချက်ပြုတ်နှင့်အရည်ပျော်ရန်အဆင်သင့်ဝယ်ယူရန်ကြိုက်တယ် Simi ကိတ်မုန့်နှင့်ချို ။ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင် isomalt ကိုကုန်ကြမ်းအမှုန့်များမှပြုလုပ်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုသုံးနိုင်သည် ရှင်းပါတယ် isomalt စာရွက် ။
သင်၏ Gingerbread အိမ်ကိုဘယ်လိုစုပုံရမလဲ
သငျသညျအစဉျအမွဲ gingerbread အိမ်သူအိမ်သားကိုအတူတကွထားရန်ကြိုးစားခဲ့ဖူးလျှင်, သင်ကနည်းနည်းစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိ! သင်လိုအပ်သည့်အရာသည်အချို့ဖြစ်သည် Thick တော်ဝင် icing နှင့်သည်းခံခြင်းအချို့။ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏တော်ဝင်အေးခဲမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။ သူတို့ပစ္စည်းများထဲတွင်ရောင်းသောပစ္စည်းသည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသည်။
သင်သည်သင်၏သကြားအပိုင်းအစများကိုသုတ်ခြင်းနှင့်အတူတကွပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏အပိုင်းအစများကိုစုစည်းရန်အရည်ပျော်သော isomalt သို့မဟုတ် caramel များကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ယို။ သကြားဓာတ်မကျစေရန်အလွန်သတိထားပါ။
အဆင့် 1 - Royal icing အချို့ကိုပိုက်အိတ်ထဲထည့်ပြီးအပေါက်ငယ်တခုပြုလုပ်ရန် (သို့) #2ပိုက်ထိပ်ကိုသုံးရန်အဆုံးကိုဖြတ်လိုက်ပါ။
အဆင့် ၂ - ရှေ့ဘက်နှင့်နောက်ဖက်အပိုင်းနှစ်ဖက်တွင်မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုကိုအစွန်းတစ်လျှောက်တွင်ကပ်ပါ။ သင်၏တော်ဝင်အေးခဲမှုနှင့်အတူ skimpy မနေပါနဲ့!
အဆင့်3- ဘေးနံရံကို ကပ်၍ ပြားချပ်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထားပါ။ ယခုအခြား sidewall ကိုပူးတွဲပါ။ ထိုအခါသင်သည်နောက်ကျောအပိုင်းအစပေါ်တွင်တင်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်ပရှိပိုလျှံသောတော် ၀ င်မှုများကိုပယ်ဖျက်ပါ၊ သို့သော်အတွင်း၌အမြားအပြားရှိသင့်သည်။ သငျသညျလိုလျှင်ပင်ထပ်ထည့်ပါ! လုံခြုံစိတ်ချရအောင်အိမ်ခေါင်မိုးကိုမထည့်ခင်တစ်နာရီလောက်ကြာအောင်ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်လိုက်တယ်။
Pro-tip: အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ Gingerbread အိမ်သို့အလှဆင်ပစ္စည်းများစွာကိုသယ်ဆောင်နေလျှင်၊ သင်၏အလှဆင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုပထမဆုံးထည့်။ ခြောက်သွေ့စေပြီးသင့်အိမ်ကိုစုစည်းနိုင်သည်။
အဆင့်4- ခေါင်မိုးကိုထည့်ရန်အိမ်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိတော်ဝင်မင်းသမီးအချို့ကိုသွယ်တန်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်ခေါင်မိုး၏ပထမပိုင်းကိုထည့်သည်။ ထိုအခါငါအိမ်၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းနှင့်အိမ်ခေါင်မိုး၏ပထမ ဦး ဆုံးအပိုင်းအစ၏ထိပ်အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်တော်ဝင်ပိုက်နှင့်ခေါင်မိုး၏နောက်ဆုံးအပိုင်းအစထည့်ပါ။ သကြားလုံးထပ်မထည့်မီဤသူငယ်ကိုတစ်ညလုံးခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ၊ သို့မှသာကျောက်တုံးခိုင်သည်။
အဆင့်6- အလှဆင်! သင်၏ Gingerbread အိမ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်သင်သည်သကြားလုံးအမျိုးမျိုးနှင့်အရောင်အသွေးစုံလင်သော icing ဖြင့်အလှဆင်နိုင်သည်။ ငါ Freed ရဲ့ Bakery ကဒီ gingerbread အိမ်သူအိမ်သား LOVE နှင့်အချို့သောနေ့ကဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ငါ icing အပေါငျးတို့သအရောင်များနှင့်သကြားလုံး၏ဖန်တီးမှုအသုံးပြုမှုကိုချစ်ကြတယ်။ သငျသညျ gingerbread အိမ်အတွေးအခေါ်များကိုပိုမိုလိုလျှင်ငါ့ 25 အကောင်းဆုံး gingerbread အိမ်စိတ်ကူးများ post ကိုစစ်ဆေးပါ။
တစ် ဦး က Gingerbread အိမ်အလှဆင်ဖို့ဘယ်လို
ကျွန်ုပ်၏ Gingerbread အိမ်ကိုအလှဆင်ရန်အတွက် M&M၊ ခဲယဉ်းသောသကြားလုံးများ၊ သကြားလုံးကြံများ၊ ကြယ်သေးသေးလေးသကြားလုံးသကြားလုံးများနှင့်ချောကလက်အရက်ဆိုင်များကဲ့သို့သောသကြားလုံးများစွာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သင်နှစ်သက်သောသကြားလုံးများကိုသာသုံးနိုင်သည်။
သကာရည်မပါဘဲ Gingerbread အိမ်စာရွက်
သကာရည်ကုန်သွားသလား။ ရပါတယ်! သင်ဤ gingerbread အိမ်စာတွင်သကာရည်အနည်းငယ်သောအရာများကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ သကာရည်နေရာတွင်မှောင်မိုက်သောပြောင်းဖူးရည်၊ ပျားရည်၊ မေပယ်ရည်သို့မဟုတ်အညိုရောင်သကြားကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်ပမာဏအား (ခွက်များ) မဟုတ်ဘဲအလေးချိန်အားဖြင့်တူညီစွာအသုံးပြုပါ။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာ Gingerbread အိမ်တွေအများကြီးမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါဒီ gingerbread အိမ်စာနည်းနည်းနဲ့လေ့လာပြီးတာနဲ့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်းတွေအပေါ်အခြေခံပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီဇိုင်းအချို့လုပ်နိုင်သလိုခံစားရတယ်။ ငါ Friendsgiving အဘို့ဤသည်ဤတနင်္ဂနွေအလှဆင်ဖို့မစောင့်နိုင်!
အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေး gingerbread အိမ်စာ။ အလွန်အစွမ်းထက်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောတင်းပလိတ်များကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည့်အတွက်အလွန်မုန့်ဖုတ်သည့်အခါမပြန့်ပွားနိုင်။ ဤစာရွက်တွင် gingerbread house template ကို အသုံးပြု၍ gingerbread house သုံးခုပြုလုပ်ရန်လုံလောက်သည် ပြင်ဆင်ချိန် -ဆယ့်ငါး မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၁ နာရီ အေး:နှစ်ဆယ် မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၁ နာရီ ဆယ့်ငါး မိနစ် ကယ်လိုရီ၁၁၂kcal
▢၂၈ oz (850 ဆ) AP Flour
▢3/4 Tsp (3/4 Tsp) သစ်ကြံပိုးခေါက်
▢1/4 Tsp (1/4 Tsp) ဂျင်း
▢1/2 Tsp (1/2 Tsp) အခွံမာ
▢1/4 Tsp (1/4 Tsp) လေးညှင်းပွင့်
▢3/4 Tsp (3/4 Tsp) ဆားငန်
▢၇ oz (၁၉၈ ဆ) ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက်
▢၆ oz (၁၇၀ ဆ) သကြားဓာတ်
▢၁၆ oz (454 ဆ) သကာရည်
▢၁ ကြီးမားသည် (၁ ကြီးမားသည်) ဥ
▢၅ ကြိုက်တယ် jolly ranchers သို့မဟုတ် isomalt ပြတင်းပေါက်များအတွက်
ခိုင်မာသောတော်ဝင် Icing စာရွက်
▢၁၆ အောင်စ (454 ဆ) သကြားမှုန့် ဆန်ခါချခဲ့သည်
▢နှစ် အောင်စ (57 ဆ) Pasteurized ကြက်ဥလူဖြူ
▢1/4 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ပေးပြီးသွားပြီများမုန့်
▢လှည်းနှင့် whisk ပူးတွဲနှင့်အတူရောနှောရပ်ပါ
အဆိုပါ Gingerbread အိမ်သည်
မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက် (သို့မဟုတ်မီးဖိုပေါ်ကအရည်အတွက်အထိအရည်) အထိအရည်ပျော်သည်အထိအပူမပေးပါ
ရပ်တည်ချက်ရောနှောခြင်းတွင်, တိုတို whisk, သကြားနှင့်သကာရည်။ ကြက်ဥ Add နှင့်ပေါင်းစပ်သည်အထိရောမွှေပါ
လှော်တွဲမှုသို့ပြောင်းပြီးခြောက်သွေ့သောအရာများကိုထည့်ပါ။ ချောမွေ့သောဘောလုံးပုံစံမစတင်မချင်းအလယ်အလတ် / အနိမ့်တွင်ရောနှောပါ၊
မုန့်စိမ်းကို 1/4 'အထူရှိသောမုန့်ဖုတ်စက္ကူသို့မဟုတ်မုန့်ဖုတ်ပေါ်သို့လှိမ့်ပါ။ မုန့်စိမ်းကိုတတ်နိုင်သမျှအထူအထိပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားပါ။
မိနစ် ၂၀ အဘို့မုန့်စိမ်းကိုအေးခဲစေနိုင်သည်။
သင်၏တင်းပလိတ်များကို အသုံးပြု၍ ပုံစံများကိုဖြတ်တောက်ပါ။ ပိုလျှံသောမုန့်စိမ်းကိုဖယ်ရှားပါ (ပြန်လည်တွန်းလှန်။ အပိုင်းပိုင်းပိုမိုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်)
အလွန်မြဲမြံစွာမရောက်မှီတိုင်အောင် ၅၀-၆၀ မိနစ်ခန့်အတွက် ၃၀၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်သတ်မှတ်ထားသောမီးဖို၌ဖုတ်ရမည်
Gingerbread ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်မီးဖိုမှဖယ်ရှားပြီးရွေ့လျားခြင်းမပြုမှီအအေးခံပါ။ သင်၏ gingerbread သည်ယခုအခါတပ်ဆင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
တော်ဝင် Icing သည်
ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုပေါင်းစပ်ဖို့အနိမ့်ကိုရောနှောပြီးနောက် 1-2 မိနစ်ခန့်မြင့်မားသောအထိတိုးမြှင့်။ သင့်ရဲ့ vanilla ထုတ်ယူထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဖြူသည်အထိရိုက်။5မိနစ်ထက်ပိုကြာအောင်မွှေရန်မလိုအပ်ပါ။
တော်ဝင်အေးခဲသည့်ဖလားကိုအဖုံးပါသောပန်းကန်လုံးသို့မဟုတ်ကွန်တိန်နာထဲသို့ထည့်ပါ။ သင်၏ Thicky တော်ဝင်အေးခဲမှုသည်သင်လိုချင်သောကိုက်ညီမှုကိုလျှော့ချရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
duncan အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်ရောနှောပါဝင်ပစ္စည်းများ hines